Fiandrasana fisotroan-dronono :: Misy tranolay ho an’ny zokiolona eny Anosy • AoRaha
Fiandrasana fisotroan-dronono Misy tranolay ho an’ny zokiolona eny Anosy
Nametrahan’ny Tahirimbolam-panjakana lay hialofan’ireo zokiolona mpandray fisotroan-dronono eny amin’ny Plan Anosy, omaly, ho fiarovana azy ireo amin’ny hatsiaka sy ny masoandro. Mipetraka avokoa ny zokiolona rehetra sady ampanarahina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. «
Voahaja ny elanelana iray metatra. Nasiana toerana hanasana tanana mialoha ny handraisana ny fisotroan-dronono sy hiandrasana eo amin’ny tranolay », hoy Rasoarimanana Lucie, percepteur principal Atsimondrano.
Nametraka sy nijery ny fandaminana entina hanafainganana ny fandoavana ny fisotroan-dronono ihany koa ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola, amin’ny alalan’ny Tahirimbolam-panjakana. Isan’izany ny fametrahana ny laharana ho an’ny dimy andro voalohany. Eo ihany koa ny fisokafan’ireo toerana fandraisana fisotroan-dronono nanomboka tamin’ny 6 ora maraina manerana ireo toerana eto Antananarivo sy ny manodidina.
Tafaverina ny fizaràna CVO tamin’ny boriborintany roa
Fitaterana :: Miverina miasa ny taksiborosy any amin’ny faritra hafa
Fialana amin’ny fihibohana :: Entanina hiara-hiaina amin’ny Covid-19 ny Malagasy